By မိုးမိုး 15 August 2018
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် သိမ်းဆည်းခံထားရသည့်မြေယာများ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး
NLD ပါတီမှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးက ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် လွှတ်တော်တွင် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွဋ်က လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် စိုက်ပျိုးနေသောလယ်ယာမြေများဆုံးရှုံးသွားသော ဒေသခံများအား၎င်းတို့ ရွာဝန်းကျင်ရှိမြေလွတ်မြေလပ် ၁၉၀၀ ဧကခန့်ကို စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် မြေဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပေးပြီး ခွဲဝေပေးရန်အစီအစဉ် ရှိ၊မရှိကို အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် မေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
NLD အစိုးရအနေဖြင့် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် သိမ်းဆည်းခံရသည့် မြေယာကိစ္စများကိုဖြေရှင်းပေးပါက သမိုင်းတွင် မှတ်တမ်းတခုအဖြစ်ကျန်ရစ်မည်ဖြစ်မည်ဟုလည်း ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
ဦးရဲထွဋ်က “အထူးသဖြင့်ဒီ NLD ဒီမိုကရေစီအစိုးရခေတ်မှာ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးသင့်တယ်။ ကိုယ့်အစိုးရသက်တမ်းမှာ ဒီလက်ပံတောင်း ပြဿနာကြီးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးတယ်ဆိုတာ ဒါသမိုင်းပဲ။သမိုင်းမှာအစိုးရအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တန်ဖိုးကိုဒါမှလည်း ပြည်သူတွေအနေနဲ့သိမယ်” ဟုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် မီဒီယာများကိုပြောသည်။
အဆိုပါမေးမြန်းမှုကို စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီးဦးလှကျော်က ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ညောင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကနီမြို့နယ်၊ ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာနှင့် တောင်ပေါက်ကျေးရွာတို့တွင် စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာစုစုပေါင်း ၁၇၂၇ ဧကရှိကြောင်း၊ ယင်းစိုက်ပျိုးမြေများကို အစားထိုးဖော်ထုတ်ရန် လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သည့်တောင်သူများအနေဖြင့် လုပ်ကိုင်လိုခြင်းရှိ/မရှိဆန္ဒသဘောထားကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မေးမြန်းဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်မည့် မြေနေရာမှာ ဒေသခံတောင်သူများနှင့် မိုင် ၄၀ ခန့်ဝေးကွာပြီးသွားလာရန် မလွယ်ကူကြောင်း သိရသည်။
ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် ယာမြေ ၅ ဧကကျော် သိမ်းဆည်းခံရသူတုံတောကျေးရွာမှ ဒေါ်စန်းနွဲ့က “၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက သီးနှံ နစ်နာကြေးပေးပါဆိုလို့ တောင်းတော့လည်းေ ဘာ်လီဘောပုတ်သလိုတယောက်နဲ့ တယောက် လွှဲချနေတာယနေ့အချိန်ထိပါပဲ။ ဖြေရှင်းပေးခြင်းလည်းလုံးဝမရှိဘူး” ဟုဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမီတက် (MEHL) သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ စ၍ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီသတ္တုတွင်းစီမံကိန်းမြေအတွက် မြေ ၇၈၆၇. ၇၈ ဧကတွင် ဓာတ်သတ္တု အကြီးစားတူးဖော်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ MEHLသည် တရုတ်နိုင်ငံဝမ်ပေါင် သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ (Wanlao Miming Lemited) နှင့် အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေခံစားသည့် စနစ် (Production Sharing Contract) စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးယင်းစီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် မြေဧက ၇၈၆၇ . ၇၈အနက် ၆၇၈၄ ဧကအတွက်သာလျော်ကြေးပေးခဲ့ပြီးလက်ပံတောင်းဒေသအတွင်းရှိ ဝက်မှေး၊ ဇီးတော၊ ဆည်တဲ၊ မိုးကြိုးပြင်၊ တုံတောကျေးရွာဒေသများမှ တောင်သူများကမြေယာလျော်ကြေးမယူခဲ့ဘဲ၊အဆိုပါ စီမံကိန်းဖျက်သိမ်းရန် အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်၍သပိတ်စခန်းများဖွင့်ကာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကမီးခိုးဗုံးများ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးများနှင့် မီးသတ်ပိုက်များသုံးကာလူစုခွဲခဲ့သဖြင့် လူဦးရေ ၁၀၀ ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သောလက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်း၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကအပြီးသတ် အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုအစီရင်ခံစာ၏ စာမျက်နှာ ၆၇၊ အပိုဒ် (၃) တွင် ဒေသခံများဆုံးရှုံးသွားသောလယ်ယာမြေများကိုအစားပေးသည့် အနေဖြင့် ၎င်းရွာများဝန်းကျင်ရှိ မြေလွတ်၊ မြေလပ် ၁၉၀၀ ဧကခန့်အားစိုက်ပျိုးနိုင်သည့် မြေ ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပေးပြီးခွဲဝေပေးသင့်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စုံကော်အစီရင်ခံစာအတိုင်းကိုတသွေမတိမ်းလိုက်နာဆောင်ရွက်စေချင်တယ်။ ကျမတို့ကဘာပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြန်ထားတယ်။ကျမတို့ကစုံကော် အစီရင်ခံစာအတိုင်းသွားမှာပဲ” ဟုဒေါ်စန်းနွဲ့ကပြောသည်။
Topics: ကြေးနီစံမံကိန်းကြောင့် သိမ်းဆည်းခံမြေယာကိစ္စ အစိုးရဖြေရှင်းပေးရန် NLD အမတ်တောင်းဆို